SI AAD U QUUDISO KAROOTADA LEH DAAWEYNTA DAD: SIDA LOO ABUURO GEEDO BIYAHA SABOOLKA AH EE DHULKA U FURAN, MA SUURTAGAL TAHAY IN LA SOO SAARO MARO, DOODWANAAG, SIDA LOO DALBADO BACRIMINTA? - BEER CAGAARAN
Maxaa tallabada dadku ku dari karootada iyo sida loo sameeyo? Maxaa lagugula talinayaa in la isticmaalo?
Karootada waa dalag aan qabyo ahayn oo ninkii beerta qaban lahaa. Si kastaba ha ahaatee, khudraddan macaan ma si fiican u koraan ciidda saboolka ah, sidaas darteed waxaad u leedahay inaad quudiso dabacasaha si ay u koraan ballaaran, siman oo macaan.
Dad badan ayaa doorbida kiimikooyinka ka yimaada dawladaha dukaamada, waayo-aragnimo la xaqiijiyay ee bannaanka u badan.
Next, tixgeli waxa aad quudin kartaa ka dib markii biqilka, iyo sidoo kale waxa Bacriminta aan la isticmaali karin.
Nooc nooca bacriminta ah ayaa ka duwan dukaanka?
Daawooyinka dadwaynaha waa Bacriminta aan la cayimin oo ay baareeyeen bannaanka u badan. Waxay ka duwan tahay Bacriminta warshadaha, waxay diyaar u yihiin qashin (cunto, beerta), ama iibsaday, laakiin ma aha xarun beereed gaar ah, laakiin dukaanka joogtada ah ama farmashiyaha. Kuwani waa walxo aan aheyn quudin rasmi ah, laakiin, sida ku xusan khibradda, waxay leedahay saameynta la rabo dhirta.
Maxaa ka fiican in la isticmaalo?
Inkasta oo ay bannaanka u badan yihiin ma rabaan inay isticmaalaan "kimistari" si ay u quudiyaan dabacasaha, waxaa muhiim ah in la fahmo in labada daaweyn ee dadweynaha iyo bacriminta warshadaha ay ka ciyaaraan qaybtooda. Isbarbardhigga, isticmaal miiska.
Xulashada isbarbardhigga Dukaan (industrial) Bacriminta Dhaqanka dadweynaha
Kharashka Qaali ama jaban Kharash badan
Khatarta dadka Qaybta halista ee kala duwan waxay ku xiran tahay daroogada Amniga marka loo isticmaalo si sax ah
Dhibaatada ciidda Joogso Ha baqin
Ficilka ficilka Feejignaan Wide
Goorta la codsado Marka ay lagama maarmaan tahay in lagu daro walxo gaar ah oo carrada ku jirta tiro aad u qeexan Markaad u baahan tahay inaad hagaajiso qaabka iyo qiimaha nafaqada ee ciidda guud ahaan.
Maxay ku quudin karaa dalagga aasaasiga ah ka dib biqilka iyo waqti kale?
Maxay caanaha khudradda u cabbi karaan koritaanka wanaagsan? Wixii quudinta dabacasaha waxaa loo isticmaalaa daaweyn kala duwan oo dadweyne ah, mid walbana wuxu leeyahay faa'iido iyo khasaaro.
Bacda cusbada (sodium chloride) ayaa muddo dheer loo isticmaalay salting sariiraha. Salt waxay ka caawisaa in si deg deg ah u milmo nafaqooyinka ciidda, sidaas darteed karootada si buuxda u nuugo.
Saameyntu si gaar ah ayaa loo ogaan karaa on carrada saboolka ah - ka dib markii sariiraha la cusbayn, karootada koraan more macaan on iyaga. Si kastaba ha ahaatee, cusbada lafteeda ma keeno faa'iido badan.
Khamriga Bakeeriga waa fungi microscopic ah, marka, marka biyaha lagu kala diro, maqaallo qarsoodi ah oo dardar-gelinaya koritaanka karootada dabacasaha. Waxay sidoo kale sii wanaajiyaan waxqabadka bakteeriyada faa'iido leh ee ciidda, taas oo ay ugu wacan tahay bacriminaha dabiiciga ah si fiican loo jaro iyo nitrogen iyo fosfooraska ayaa la sii daayaa.
Ficilkooda, fangaska khamiirku waxay la mid yihiin daroogooyinka EM, laakiin waa ka jaban yihiin. Isticmaalka khamiirka ayaa suurtagal ah oo keliya dhulka dusha sare leh. Haddii aad marwalba dalbato dhar kasta, ciidda ayaa luminaysa waxoogaa jidhka ah waxayna noqoneysaa mid liidata. Intaa waxaa dheer, inta lagu jiro halsano, khamiir nuugaya potassium iyo calcium.
Ash waxa la soo saaraa adigoo gubaya wax. In beerta adoo isticmaalaya ash alwaax. Waxay ka kooban tahay waxyaabo badan oo faa'iido leh (potassium, calcium, iron, sulfur, magnesium, boron, fosfooraska).
Haddii aad qoryo ka samayso qoryo adag (dhir, larch, cagaar), ka dibna waxay noqon doontaa badan oo kalsiyum ah.
Oo marka gubashada cawska (cawska, cawska, cawska) bacriminta ku jiri doonaa tiro badan oo ah potassium.
Maadooyinkaasi waa karootiga lagama maarmaanka ah muddada ay ku jiraan khudradda xididka leh.
Ash waxaa loo baahan yahay marka koraan karootada on carrada acidic (taas oo dhaqanka uusan jeclaan wax badan), maxaa yeelay waxay kordhisaa heerka alkali ee iyaga.
Dhibaatooyinka bacriminta waxaa ka mid ah awoodda lagu yareeyo nuugista fosfate by dhirta, sidaas darteed ash waa in si gooni gooni ah looga daboolaa feed ee ku jira fosfooraska. Intaa waxaa dheer, waxaa laguma talinayo in aad isticmaasho on carrada adag alkaline.
Maaddadu waxay ka kooban yihiin madow iyo muraayado madow oo leh qalab dhaadheer. Waxaa lagu iibiyaa farmasiyada qaabka mugdiga ah 5% maadada khamriga oo leh dabeecad. Ka waraabinta iodine waxay kordhisaa dhalidda ee karootada, waxay hagaajisaa dhadhanka iyo midabka dalagyada xididka ah.
Dhibaatooyinka waxaa lagu tilmaami karaa bani-aadmiga dadka. Iyo karootada, haddii qiyaasta iodine aad u sarreeya, caleemaha ayaa noqon kara huruud.
Faleebo nettle waxaa ku jira badan oo nitrogen ah iyo birta iyo waxaa loo isticmaalaa isla markiiba ka dib markii la beero karootada, sidaa daraadeed in dhirta uu leeyahay caleenta cufan oo xoog leh oo siin doona nafaqo ku filan xididada.
Ha dabacasoobin karootada leh faleebo isku-buuqa ah ee dhexda dhexe ee xilliga sii kordhaya, si aanay u korin cagaaraha "cagaarsho" si ay u waxyeeleeyaan xididada.
Dufanka lo'da, ama mullein, wuxuu kordhiyaa waxyaabaha humus ee carrada iyo waxa ku jira maaddooyinka lagama maarmaanka u ah dabacasaha: nitrogen, fosfooraska, potassium, calcium, magnesium iyo kuwo kale.
Mullear waxaa loo isticmaali karaa karootada kaliya ee qaabka faleebo iyo tiro yar, tan iyo xad-dhaaf ah bacriminta bani'aadamka ayaa sababi kara duufaan dalagyada xididka ah.
Halbeegga qashinka waxa kale oo ka mid ah potassium, nitrogen, fosfooraska, magnesium. Waxay kordhisaa dhalidda dabacasaha, oo ay ugu wacan tahay ficil tartiib tartiib ah oo awood u leh inay "quudiyaan" sariiraha dabacsan muddo 3 sano ah ka dib codsi.
Dhibaatooyinka waxaa ka mid ah awood la'aanta isticmaalka cusub - digada digaagga ee aan lakulmeen waxaa ku jira wax badan oo ka mid ah uric acid, taas oo gubi kartaa xididdada dabacasaha.
Bacriminta Tani waxaa laga helaa pereplevaniya qashinka organic iyo qashinka beerta. Iyada oo ay sabab u tahay diyaarinta saxda ah, waxay u noqonaysaa humus - lakab nafaqo leh oo leh kaneecooyin faa'iido leh.
Compost waxaa loo isticmaali karaa bacriminta sariiraha loogu talagalay dabacasaha xilliga dayrta marka qoyaan, iyo sidoo kale mulch. Compost waa bilaash, laakiin waxay u baahan tahay waqti badan iyo dadaal si loo diyaariyo.
Liiska Bacriminta aan la isticmaali karin
Maxaa lagugula talinayaa in la quudiyo dalagga, sababtoo ah markaa si liidata u koraan ama noqotaa mid aan dhadhamin? Khudaarta cagaaran waxay si fiican uga jawaabaan Bacriminta, laakiin qaar ka mid ah waa in loo adeegsadaa daryeel ama ma aha:
suurtagal maaha in la buuxiyo sariiraha digaag cusub, sababtoo ah xaddiga ballaadhan ee bakeeriga, xaddiga kobaca "gubasho" oo uu noqdo "horned" (xididku wuxuu kala qaybsan yahay laba ama qaababka habdhaqameedka oo wax u dhimaya muuqaalkiisa iyo nadiifinta nadiifinta), dhadhan fiican oo liita ;
Dalagyada rootiga sidoo kale waxay noqdaan kuwo aan si aan fiicnayn lahayn, haddii xilliga xilliga sii kordhaya ee karootada ay ka buuxsameen Bacriminta leh badan oo nitrogen ah.
Tilmaamaha tallaabo tallaabo ah: sida loo quudiyo khudaarta?
Inta badan daaweynta dadweynaha waxaa loo isticmaalaa qaab diyaarsan, sidaas darteed diyaarinta dharka sare waxaad u baahan doontaa:
dhalada nus litir ama litir litir ah oo loogu talagalay diyaarinta dareenka;
baaldi xalka u shaqeynaya;
gacmo gashi si aadan gacmahaaga u nadiifin;
qaadada ama qaadada si loo cabbiro qaddarka loo baahan yahay walaxda.
Ka feker, mugee, qaabkee, xilliga xilliga sii kordhaya iyo inta jeer ee aad u baahan tahay inaad sameyso dharka quraaradaha ee karootiga.
Dharka ugu sareeya Sida loo kariyo Imisa ayey tahay / sida loo sameeyo Goorta la sameeyo Imisa jeer iyo inta lagu jiro mudada
Salt 1 tbsp. uumi milix iyo milix 10 l oo biyo ah Sariir-cidhiidhi ah hore Bishii Luulyo iyo Agoosto, marka xididdada la sameeyo 1 wakhti
Khamiis 0.5 kg oo khamiir ah 2.5 litir oo biyo diirran + nus koob oo ash ah. Xalka ayaa lagu qasi karaa biyaha 1:10 Dharka labiska Guga ka dib biqilka ka dib si loo dedejiyo koritaanka mass cagaaran, ka dib 3 toddobaad iyo bartamihii August 3 jeer
1 koob oo 1 mitir ah2.
100 g halkii 10 litir oo biyo ah, ku adkeyso nus maalin.
Biyaha hoos yimaada.
Bishii May, ka dib markii biqilka.
Bishii Juunyo-Luulyo intii lagu jiray dhismaha dalagyada xididka.
Iodine 20 dhibcood ilaa 10 litir oo biyo ah Booska biyaha Bishii May, ka dib markii biqilka 1 wakhti
Hoos-u-dhaca geedka In 200 litir oo foosto ah 2/3 maro, 1/3 biyo Biyaha hoos yimaada Bilowga xilli sii kordhaya 2-3 jeer wakhti wiig ah
Korovyak Faleebo 1:10, ku adkee toddobaadka Booska biyaha Kadib khafiifinta iyo 3 toddobaad kadib 2 jeer 3 asbuuc
Digaag daroogada Kala wareeji biyo 1:20, ku adkee 10 maalmood oo dibedda ah Biyaha u dhexeeya saf Bishii Juun, 2 todobaad kadib biqilka 1-2 jeer oo u dhaxeysa 2 toddobaad
Compost Isku faaf sariirta, dhulka isku dar ama ku faaf khafiifka 6-8 kg halkii 1m2 Xilliga dayrta ee qashin ama sida mulch 1 wakhti ama inta lagu jiro xilliga xagaaga
Ka hortagga waxyeelada xididka cayayaanka
Bacriminta Qoyska waa kuwo wanaagsan maaha oo kaliya dharka sare, laakiin sidoo kale sida prophylactic ka soo horjeeda cayayaanka ee karootada.
Saliid waxay caawisaa:
laga bilaabo dukhsiga dabacasaha (biyo 3 jeer oo dhexda ah 2 asbuuc, laga bilaabo maalmaha koowaad ee Juun, si tartiib tartiib ah u kordhiya xaddiga xalka: 300 g halkii 1 l oo biyo ah, ka dibna 450 g halkii 1 l oo biyo ah, ka dibna 600 g), ka dib markaa waa inaad sariirta ku daadisaa biyo nadiif ah;
laga bilaabo slugs - ku buufis sariirta leh 10% milix cusbo.
Kabka loogu talagalay ka-hortagga waxaa lala isticmaali karaa bacda tubaakada ama tubaakada sigaarka:
laga bilaabo dukhsiga dabacasaha - Isku qasbo bacda iyo tubaakada bacda 1: 1 oo ku kala firdhiya safka qiyaasta 5-10 g halkii 1m2;
liiska - Xidho u dhexeysa inta u dhaxaysa safarka, ku dul shub saar sambabada kor ku xusan.
Khaladaadka suurtagalka ah
Iyadoo isticmaalka haboon ee daaweynta dadweynaha for karootiga quudinta ma aha oo kaliya ka caawiyaan dhirta, iyo xitaa waxyeello. Khaladaadka caadiga ah:
qiyaaso badan oo bacriminta ah - dhadhanka dalagga xididku wuu ka sii xumaanayaa, ma awoodi doono in la dhigo muddo dheer;
dharka ugu sareeya ee xaashida ee kuleylka - Caleenta caleenta waxaa lagu gubi karaa dhibcaha biyaha ee qorraxda;
isticmaalka digada cusub ama qiyaaso badan oo bacriminta dabiiciga ah - Dufku wuxuu ku koraa mid aad u ballaaran oo ka mid ah dhibaatooyinka dalagyada xididada (waxay noqdaan kuwo aan sinnayn).
Daryeelka kaddib: Miyaan u baahanahay in aan waraabiyo khudradda?
Ka dib markii bacarimis, sariiraha dabacasaha waa in la waraabiyaa, walxaha kale ee waxtar leh laguma dhex nuujin doono ciidda, iyo xakameeyo cirridka.
Dadka degaanka xagaaga ee aan aqbalin kiimikada beertooda, qudaarta quudinta leh daaweynta dadku waxay noqon kartaa hab wanaagsan. Ka dib oo dhan, waxay heli karaan, jaban, ammaan ah. Waxaa lagama maarmaan ah in loo qoondeeyo waqti loogu talagalay diyaarinta bacrimiyaasha qoyska, laakiin looma dhumin doono waxba - waa weyn, dalagyo xididdo macaan ayaa kori doona.